တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ထပ်မံအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အကူညီလိုအပ်နေပါတယ် | Su See Yar
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ထပ်မံအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အကူညီလိုအပ်နေပါတယ်
ပင်မစာမျက်နှာ / တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ထပ်မံအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အကူညီလိုအပ်နေပါတယ်
Grant Concept Proposal Paper
(1) July & Partners (Pro Bono Lawyers’ Network)
(2) D/15, Thida Street(2), Phaw Kan Quarter, Insein Township,Yangon.
09 770740528, 09 661540680
Project Name- Legal awareness and Community empowerment
(3) Hlaing Tharyar , Insein, Shwe Pyi Thar, Dala , ThaLyan & Dagon Seit Kan Townships.
(4) အထက်ပါမြို့နယ်များတွင် Legal Awareness Training များပေးခြင်းနှင့် ဥပဒေအထောက်အကူပြုသူများကို မွေးထုတ်ပေးခြင်းများပြုလုပ်သွားပါမည်။
July & Partners Pro Bono Lawyers’ Network သည် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ကာ စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ စုဖွဲ့ထားသော့ တက်ကြွသည့် လူငယ်ရှေ့နေများကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ရက်သည် ၂၀၁ရခုနှစ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၌ လူမျိုးရေး ပဋ္ဌိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောသို့ UEHRD programနှင့်ပူးပေါင်းကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းများ ကူညီဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ တတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံ ုအကြိုလူထုဆွေးနွေးပွဲကိုလည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလပိုင်း တွင်ဦးဆောင်ကာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Facebook Page ၌ “ဥပဒေရေးရာ ပြသနာအဖြာဖြာ သိလိုရာမေး” အမည်ဖြင့် ဥပဒေဗဟုသုတများကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မျှဝေပေးခြင်း၊ အခမဲ့ဆွေးနွေးပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး လူအများဥပဒေကို သိရှိနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Online Platform တစ်ခုပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ရှေ့နေမဌားရမ်းနိုင်သော အမှုသည်များကို အခမဲ့ရှေ့နေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဆင်းရဲပြီးငွေကြေးမတတ််နိုင်သူများ၊ အမျိုးသမီးအမှုကိစ္စများ၊ လယ်သမားအမှုကိစ္စများ၌ အခမဲ့ရှေ့နေအမှုလိုက်ပါ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၌ Local Community နှင့် Lawyers များအကြား Advocacy Program များတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Covid 19 တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပြည်တော်ပြန် ဒေတာများထည့်ပေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် Asia Pro Bono Virtual Conference များတွင် ပါဝင်တက်ရောက် လေ့လာခဲ့ကြပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး လက်လှမ်းမီသလောက်ကြိုးစားနေသည့် လူငယ်ရှေ့နေ ကွန်ရက် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(B) Mission,Vision & Purpose
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆင်းရဲသည့် နို်င်ငံဖြစ်သည့်အလျောက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင် အလွန်အားနည်းသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကျွန်ပ်တို့အဖွဲ့သည် ပြစ်မှုအဖြစ်များသည့် မြို့နယ်များကို ရွေးထုတ်ပြီး ထိုမြို့နယ်များတွင် ဥပဒေဆိုင်ရာအသိပညာများကိုမျှဝေသင်တန်းပေးပြီး ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေအထောက်အကူပြုသူများကို မွေးထုတ်ပေးသွားပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်မည့်မြို့နယ်များ၌ ဒေသဆိုင်ရာ ဥပဒေအထောက်အကူပြုပေးမည့် သူများကို သင်တန်းပေးမွေးထုတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဒေသများ၌ ဥပဒေအထောက်အကူပြုသူများကို ခန့်အပ်သွားပါမည်။ ဥပဒေအထောက်အကူပြုသူများသည် မြေပြင်အခြေအနေနှင့် Local Community များတွင်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည့် ပေါင်းကူးတံတားသဖွယ် လူတန်းစားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့၏ ကြားဝင်ဖြန်ဖြေညှိနှိုင်းပေးမှုများကြောင့် ကြီးသည့်အမှုငယ်အောင် ငယ်သည့်အမှု ပပျောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ကျွန််ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်သူအားလုံး ဥပဒေဆိုင်ရာဗဟုသုတများကိုရရှိလာပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးလာနိုင်ရန်နှင့် မတရားဖိနှိပ် မခံရရန်ဥပဒေဆိုင်ရာအသိပညာများလက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်းနှင့် တရားမျှတမှုကို လက်လှမ်းမီရေး၊တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(C) ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်နေသည့် လုပ်ငန်းများသည် အများပြည်သူကို အကျိုးပြုသည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ထောက်ပံ့ငွေ အလုံအလောက်မရှိပါ၍ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ထပ်မံအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲနှင့် နှောင့်နှေးမှုများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ထံမှ ထောက်ပံ့ငွေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။
(D ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် ငယ်ရွယ်တက်ကြွပြီး အတွေးအခေါ်သစ်များနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် လူငယ်များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် လူငယ်ရှေ့နေကွန်ရက် ဖြစ်သည့်အလျောက် တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းတွင် မတူညီသည့် အတွေ့အကြုံများနှင့် အရည်အချင်းများစွာရှိပါသည်။ ပရဟိတစိတ်ဓါတ်နှင့် ရိုးသားသည့် ပညာတတ်လူငယ်ရှေ့နေများ ဖြစ်ပါတယ်။
(6) (A) ဒေသဆိုင်ရာ ဥပဒေအထောက်အကူပြုသူများကို Legal Awareness Training များပို့ချပေးကာ ၄င်းတို့ဒေသများအတွင်း ဥပဒေအရနစ်နာသူများကို ဥပဒေဆိုင်ရာကူညီပေးနိုင်ခြင်းနှင့် ဥပဒေအသိပညာများကို လက်ဆင့်ကမ်းပြန်လည်မျှဝေပေးနိုင်ရန်။
(B) တစ်ဖက်တွင်လည်း Online Platform မှ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲနေသည့် ပြည်သူများဆီသို့ ဥပဒေဗဟုသုတများနားလည် သိရှိလိုက်နာစေရန် ဥပဒေ Awareness များကိုရေးသားတင်ဆက်/ထုတ်လွှင့်မျှဝေသွားပါမည်။
့ဥပဒေများကိုပြည်သူများဆီသို့မျှဝေပေးခြင်းများဖြင့် အဆင့်တန်းမြင့်သော လူနေမှုဘဝများကို တည်ဆောက်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
(7) လုပ်ဆောင်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်
တရားဥပဒေစိုုးမိုးမှုမရှိခြင်းနှင့်လူနေမှုဘဝများနိမ့်ကျနေခြင်းများသည်ဥပဒေဆိုင်ရာ အသိပညာ မရှိခြင်းများနှင့် အထွေထွေဗဟုသုတများမသိ နားမလည်ခြင်းတို့ ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူများဥပဒေအသိပညာများနားလည်လိုက်နာရန်၊ဥပဒေအသိအမြင်များပွင့်ရန်၊ဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများမဆုံးရှုံးရစေရန်နှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိလာစေရန်အတွက်အဓိကလုပ်ဆောင်ရမည်မှာဥပဒေဆိုင်ရာအမြင်ဖွင့် သင်တန်းများပေးရန်နှင့်အသိပညာဗဟုသုတများများများဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လူငယ်ရှေ့နေအဖွဲ့အစည်းသည် ပြည်သူများဆီသို့ ဥပဒေအသိပညာများဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
July & Partners Pro bono Lawyers’ Network သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားမျှတမှုလက်လှမ်းမီရေးအတွက် တတက်တအားကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေသော လူငယ်ရှေ့နေကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကျွန်မတို့ကွန်ရက်မှ တရားဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့် အသိအညာပေးပွဲများပြုလုပ်ရန် ထောက်ပံ့ငွေ(၉၃၆၀၀၀၀)ကျပ် (၆လစာ) အတွက်လိုအပ်နေပါတယ်။
ဥပဒေဆိုင်ရာ အသိညာပေးပွဲများကို တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြပါသည်။
တက်ရောက်မည့် သူ(၃၀) ဦးရေ၏ ခရီးစရိတ်များ>၄၅၀၀၀၀
သင်တန်းခန်းမ = ၁၅၀၀၀၀
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ = ၃၀၀၀၀
ဥပဒေစာအုပ်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ = ၃၀၀၀၀၀
မနက်စာနှင့် နေ့လည်စာစားသောက်စရိတ်များ = ၃၀၀၀၀၀
ဗီနိုင်းနှင့်လက်ကမ်းစာစောင်များ = ၃၀၀၀၀
သင်ကြားမည့်သူများ = ၆၀၀၀၀၀
ကုန်ကျစရိတ်များ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်မှာ- (၉၃၆၀၀၀၀) ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ကန်ပိန်းတွင် ပါဝင်ကူညီပေးမည့်လူကြီးမင်းတို့အား ကျွန်ုပ်တို့ ပရိုဘိုနိုလူငယ်ရှေ့နေကွန်ရက်မှလည်း လူကြီးမင်းတို့အတွက်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် အကျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာကို ပြန်လည်ပေးအပ်ချင်ပါတ်။
Organization- July & Partners Pro Bono Lawyers’ Network
(အမည်နှင့်ရာထူး)- Daw Ei July, Director (July&Partners Pro Bono Lawyers’ Network)
10,000 MMK Funded
93.6L MMK Goal
I am currently working on Information &amp; Counseling for Braveheart NGO about Citizenship Law Edu. Also, I&#039;m the Director &amp; Founder of July &amp; Partners Pro Bono Lawyers &amp; Network andamember of the Myanmar Lawyers Network, andasenior Lawyer. I have been active in free education for children since 2014, assisting in flood relief and resettlement, volunteering in Buthudaund, Maungdaw, Rakhine State, Participation in the Youth Exchange Program, Sharing legal knowledge to local communities and providing legal assistance, and social causes like peace and women&#039;s right campaigns. I was graduated withadegree in law in 2015,adiploma in business law in 2016, andadiploma in Tourism and Semi-Management in 2018.
D/15,Thida Street 2,Phawkan Quarter,Insein Township,Yangon.
မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်သောင်း(၁၀၀၀၀) ကျပ်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းမှုအတွက်
(၁၀၀၀၀) ကျပ်လှူဒါန်းသည့် ကုမ္ပဏီ(သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းများသည့် ကျွန်ုပ်တို့ လူငယ်ရှေ့နေကွန်ရက်ကို ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းရန် နှင့်ပြည်သူများဆီသို့ ဥပဒေဆိုင်ရာအသိအမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းများအတွက် အားအင်များပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ လှူဒါန်းမှုကိုကျွန်ပ်တို့မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ရက်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း အီးမေလ်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖေ့ဘုတ် ပေ့ချ်တွင်လည်း ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်သိန်းခွဲ(၁၅၀၀၀၀) ကျပ်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းမှုအတွက်
(၁၅၀၀၀၀) ကျပ်လှူဒါန်းသည့် ကုမ္ပဏီ(သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းများသည့် ကျွန်ုပ်တို့ လူငယ်ရှေ့နေကွန်ရက်ကို ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းရန် နှင့်ပြည်သူများဆီသို့ ဥပဒေဆိုင်ရာအသိအမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းများအတွက် အားအင်များပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ လှူဒါန်းမှုကိုကျွန်ပ်တို့မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ရက်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း အီးမေလ်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖေ့ဘုတ် ပေ့ချ်တွင်လည်း ကြေညာပေးသွားမည့်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ရက်၏ အီလက်ထရောနစ် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ခြင်းကိုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သင်တန်းပေးသည့်အခါ ဗီနိုင်းတွင်လည်း လူကြီးမင်းတို့၏ Logo အားပါဝင်ကြော်ညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေလုပ်ငန်းစဉ်များကို (၂)ရက်တာအခမဲ့အကူညီအကြံပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
(၃၀၀၀၀) ကျပ်လှူဒါန်းသည့် ကုမ္ပဏီ(သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းများသည့် ကျွန်ုပ်တို့ လူငယ်ရှေ့နေကွန်ရက်ကို ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းရန် နှင့်ပြည်သူများဆီသို့ ဥပဒေဆိုင်ရာအသိအမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းများအတွက် အားအင်များပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ လှူဒါန်းမှုကိုကျွန်ပ်တို့မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ရက်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း အီးမေလ်းနှင့် အတူကျွန်ုပ်တို့၏ဖေ့ဘုတ် ပေ့ချ်တွင်လည်း ကြေညာပေးသွားမည့်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ရက်၏ အီလက်ထရောနစ် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ခြင်းကိုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာကျပ်ငွေ လေးသိန်း(၄၀၀၀၀၀) ကျပ်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းမှုအတွက်
(၄၀၀၀၀၀) ကျပ်လှူဒါန်းသည့် ကုမ္ပဏီ(သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းများသည့် ကျွန်ုပ်တို့ လူငယ်ရှေ့နေကွန်ရက်ကို ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းရန် နှင့်ပြည်သူများဆီသို့ ဥပဒေဆိုင်ရာအသိအမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းများအတွက် အားအင်များပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ လှူဒါန်းမှုကိုကျွန်ပ်တို့မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ရက်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း အီးမေလ်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖေ့ဘုတ် ပေ့ချ်တွင်လည်း ကြေညာပေးသွားမည့်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ရက်၏ အီလက်ထရောနစ် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ခြင်းကိုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သင်တန်းပေးသည့်အခါ ဗီနိုင်းတွင်လည်း လူကြီးမင်းတို့၏ Logo အားပါဝင်ကြော်ညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေလုပ်ငန်းစဉ်များကို (၆)ရက်တာ အခမဲ့အကူညီအကြံပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာကျပ်ငွေ ခြောက်သိန်း (၆၀၀၀၀၀) ကျပ်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းမှုအတွက်
(၆၀၀၀၀၀) ကျပ်လှူဒါန်းသည့် ကုမ္ပဏီ(သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းများသည့် ကျွန်ုပ်တို့ လူငယ်ရှေ့နေကွန်ရက်ကို ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းရန် နှင့်ပြည်သူများဆီသို့ ဥပဒေဆိုင်ရာအသိအမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းများအတွက် အားအင်များပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ လှူဒါန်းမှုကိုကျွန်ပ်တို့မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ရက်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း အီးမေလ်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖေ့ဘုတ် ပေ့ချ်တွင်လည်း ကြေညာပေးသွားမည့်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ရက်၏ အီလက်ထရောနစ် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ခြင်းကိုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သင်တန်းပေးသည့်အခါ ဗီနိုင်းတွင်လည်း လူကြီးမင်းတို့၏ Logo အားပါဝင်ကြော်ညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေလုပ်ငန်းစဉ်များကို (၇)ရက်တာ အခမဲ့အကူညီအကြံပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေစာအုပ်များနှင့် လက်ကမ်းစာစောင်များတွင်လည်း လှူဒါန်းထောက်ပံ့ပေးကူညီပေးသူနေရာ၌ ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာကျပ်ငွေ ရှစ်သိန်း (၈၀၀၀၀၀) ကျပ်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းမှုအတွက်
(၈၀၀၀၀၀) ကျပ်လှူဒါန်းသည့် ကုမ္ပဏီ(သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းများသည့် ကျွန်ုပ်တို့ လူငယ်ရှေ့နေကွန်ရက်ကို ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းရန် နှင့်ပြည်သူများဆီသို့ ဥပဒေဆိုင်ရာအသိအမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းများအတွက် အားအင်များပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ လှူဒါန်းမှုကိုကျွန်ပ်တို့မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ရက်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း အီးမေလ်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖေ့ဘုတ် ပေ့ချ်တွင်လည်း ကြေညာပေးသွားမည့်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ရက်၏ အီလက်ထရောနစ် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ခြင်းကိုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သင်တန်းပေးသည့်အခါ ဗီနိုင်းတွင်လည်း လူကြီးမင်းတို့၏ Logo အားပါဝင်ကြော်ညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေလုပ်ငန်းစဉ်များကို (၁၀)ရက်တာ အခမဲ့အကူညီအကြံပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေစာအုပ်များနှင့် လက်ကမ်းစာစောင်များတွင်လည်း လှူဒါန်းထောက်ပံ့ပေးကူညီပေးသူနေရာ၌ ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။